“Barcelona ayaa ka sarreysa ciyaaryahan kasta” – Laporta oo ka hadlay bixitaanka Messi - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
By admin October 8, 2021 37
(Barcelona) 08 Okt 2021. Madaxweynaha haatan ee Barcelona, Joan Laporta ayaa markale sheegay sababihii uu Lionel Messi uga tagay safka Blaugrana isagoo carabka ku adkeeyay in kooxda ay ka sarreeyo ciyaaryahan kasta.
Halyeeyga Barcelona ee Lionel Messi ayaa kooxda ka tagay xagaagii kadib markii uu dhacay qandaraaskiisa, wuxuuna ku biiray naadiga reer France ee Paris Saint-Germain.
Barcelona ayaa isku dayday inay ceshato Lionel Messi, si la mid ah laacibka reer Argantina ayaa doonayay inuu sii joogo Camp Nou, laakiin Barca ayaa ugu dambeyn ku guuldareysatay sababa dhaqaale dartood, kaddib waxay ku dhawaaqday inuu ka tagay kooxda.
Joan Laporta ayaa wareysi dheer oo uu siiyay idaacadda “RAK1” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Sababaha uu Messi uga tagay kooxda? Aniga iyo Lionel Messi, wax farqi ah kuma lahayn sharciga dhaqaala wanaaga, kaddibna waxaa noo soo baxday inaan saxiixno maalgashi kooxda halis gelinaya, taasoo la micno ah heshiiskii CVC, markaa dabcan waan diidnay maxaa yeelay Barcelona ayaa ka sarreysa Messi kasta waxayna ka sarreysaa madaxweyne kasta ama guud ahaan ciyaaryahan.”
“Waxaan in badan isku daynay inaan sii haysanno Messi, laakiin fikradda ma ahayn mid socon karta, run ahaantiina, waxaan jeclaan lahaa Messi inuu sheego inuu diyaar u ahay inuu nagula ciyaaro si bilaash ah.”
“Waan jeclaan lahaa inay dhacdo Messi inuu diyaar u ahaa inuu ku ciyaaro lacag la’aan, waana ogaa in xiriirka uu ogolaan lahaa, laakiin ma weydiisan karno ciyaaryahanka inuu sidaas sameeyo.” ayuu yiri Joan Laporta.
Mareykanka oo ku baaqay in dib loogu laabto wadahadaladii Niyuklerka ee lala galay Iiraan
“In la difaaco Lionel Messi hadda way sahlan tahay” – Adil Rami
Hristo Stoichkov oo talo muhiim ah siiyay madaxweynaha xiga ee kooxda Barcelona si uu uga farxiyo Messi